समाजिक सञ्जालले यसरी बिगार्दैछ सम्बन्ध, यी कुरा होस् गर्न पर्छ पर्छ – List Khabar
Home / Uncategorized / समाजिक सञ्जालले यसरी बिगार्दैछ सम्बन्ध, यी कुरा होस् गर्न पर्छ पर्छ
समाजिक सञ्जालले यसरी बिगार्दैछ सम्बन्ध, यी कुरा होस् गर्न पर्छ पर्छ
admin3weeks ago Uncategorized Leaveacomment 59 Views
किनभने उनीहरूबीचमा अहिले घुस्रिएको छ, सामाजिक सञ्जाल । अर्थात् फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि । जब उनीहरू सामाजिक सञ्जालभित्र प्रवेश गर्छन्, आफ्ना पार्टनर भुल्छन् । फेसबुक, ट्विटरमा एकोहोरिन्छन् । जब दम्पतीबीच सम्वाद हुन छाड्छ वा सम्वादको वातावरण बिथोलिन्छ, तब स-साना असमझदारी बढ्छ । स-साना समस्याहरूको जन्म हुन्छ । त्यही सानो कुरा बिस्तारै हुर्कन्छ । यस्तो अवस्था आउँछ कि त्यसले श्रीमान्-श्रीमतीबीच शंका–उपशंका पैदा हुन्छ । त्यसपछि एकअर्कामा असमझदारी बढ्छ । मनमुटाव हुन्छ। ठाकठुक पर्छ ।
तपाईंलाई लाग्दो हो, जाबो फेसबुक चलाउँदैमा त्यस्तो हुन्छ र ? : निश्चय पनि फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम चलाउँदैमा त्यस्तो हुँदैन । तर जड त्यही हो । जब तपाईंको लगाव सामाजिक सञ्जालमा बढ्न थाल्छ, तपाईं भर्चुअल संसारमा हराउन थाल्नुहुन्छ। नयाँ-नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुन थाल्छ । नयाँ साथी-सर्कलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यसको साइड इफेक्ट के हुन्छ भने तपाईं वास्तविक धरातलमा रहन सक्नुहुन्न । घर व्यवहार के भइरहेको छ, बच्चाहरूको अवस्था के छ, विद्यालयमा के भइरहेको छ, बुबाआमाको स्वास्थ्यस्थिति के छ, विद्युत वा पानीको बिल बुझाइयो वा बुझाइएन यावत् कुरामा गडबडी हुन थाल्छ । यसै कुराले बिस्तारै तपाईंको पारिवारिक जीवनलाई गाँठो पार्दै लान्छ । अन्तमा एउटा जालोमा फसाइदिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हामी यति धेरै लिप्त हुन थालेका छौं कि पारिवारिक मूल्य र मान्यताहरू ओझेल पर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लिप्त भइरहँदा दम्पतीबीचको सम्वाद टुटेको छ। स्वभावैले मानिसलाई रमाइलो गर्न मन लाग्छ । हातमा स्मार्टफोन हुँदा र फेसबुक चलाइरहँदा घरायसी कुरा गर्न कसरी जाँगर चल्छ ? हामी सजिलो खोज्छौं, रमाइलो खोज्छौं । त्यही कारण त श्रीमती–श्रीमान् एकै ठाउँमा भएर पनि नभएजस्तो हुन्छ । दुवैको उपस्थिति र सामिप्यता एकअर्काले महसुस नै गर्दैनन् । न उनीहरूबीच घरायसी कुराकानी हुन्छ । न प्रेमिल संवाद नै । यसरी सामाजिक सञ्जालमा फसेर दम्पतीले आसपी सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउँछ । अर्कोतिर समस्या जटिल छ । सामाजिक सञ्जालकै कारण अहिले सम्बन्धविच्छेदको घटना बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा लिप्त भएपछि घरको सामान्य कामधन्दा नै प्रभावित भएको छ ।
छोराछोरी बिचल्लीमा परेका छन् । त्यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालको फन्दामा परेर विवाहेतर सम्बन्ध स्थापित हुने आशंका पनि प्रवल हुँदै गएको छ । क्षणिक रुपमा मनोरञ्जन लिने हेतुले जोडिएका कतिपय सम्बन्धहरू बिस्तारै जटिल अवस्थामा प्रवेश गरेको पाइन्छ । यसले अन्ततः दम्पतीबीच संशय पैदा गर्ने मात्र होइन, कलहको बिउ नै रोप्ने गरेका छन् । यसरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले दम्पतीमा विकृति भित्रिएको छ । कतिपय श्रीमान् श्रीमतीको झगडा सामाजिक सञ्जालकै निहुँमा हुने गर्छ । पासवर्डको विषयमा झगडा भएर दाम्पत्य सम्बन्ध टुट्न पुगेको घटना पनि समाजमा भेट्न सकिन्छ । अहिले दम्पतीबीचको सम्बन्धविच्छेदको घटना कहाली लाग्दोगरी बढेको छ । त्यसमा एउटा प्रमुख कारण सामाजिक सञ्जाल भएको छ ।
Previous चेन्नईमा भीषण वर्षा, शहर जलमग्न भएपछि विद्यालय र कलेज बन्द